Al-Shabaab oo toogatay Haweeney kamid aheyd Ciidanka ilaalada Madaxtooyada | Entertainment and News Site
Home » News » Al-Shabaab oo toogatay Haweeney kamid aheyd Ciidanka ilaalada Madaxtooyada
Al-Shabaab oo toogatay Haweeney kamid aheyd Ciidanka ilaalada Madaxtooyada
daajis.com:- Kooxda Al-Shabaab ayaa fagaare ku yaalla deegaanka Buq-Aqabe galbeedka gobalka Hiiraan ku toogatay jimcihii Haweeney kamid aheyd ciidammada amniga Madaxtooyada Dowlad Gobaleedka Hirshabeelle.
Haweeneyda ay dishay Al-Shabaab ayaa lagu magacaabi jiray Naxteexo Jimcaalle Maxamed. Fagaaraha toogashadan ka dhacaysa ayaa waxaa la isugu keenay boqolaal kamid ah dad deegaanka Buq-Aqabe.
Warbaahinta taageerta Al-Shabaab ayaa sheegtay in AUN Naxteexo Jimcaalle ay ka howgalaysay muddo ka badan 3 sano xarunta Madaxtooyadda Hirshabeelle ee Jowhar, oo kamid aheyd saraakiisha ammaanka Madaxtooyadda.
Al-Shabaab ayaa horay fagaarayaal ku yaalla deegaanada ay gacanta ku heyso ku dishay dad ay sheegtay inay kamid yihiin ciidammada iyo shaqalaaha DFS iyo Dowlad Gobaleedyada.